Kukhanyile kuVan Niekerk, kusemnyama kuSemenya - Impempe
Kukhanyile kuVan Niekerk, kusemnyama kuSemenya
Kufanele ukube kusuke inguzunga yetshe abelitshethe emahlombe ache kuWayde van Niekerk ngesikhathi enza isikhathi esimfaka emidlalweni yama-Olympics azoba seTokyo ngoJulayi.
UNiekerk, owanqoba indondo yegolide kwi-400m kuma-Olymics adlule, usekwazile ukungena kule midlalo ukuyovikela lesi sicoco sakhe eJapan. Lokhu kwenzeke ngemuva kokuthi ekwazile ukushaya isikhathi esifanele kwiWorld Athletics Continental Tour eSpain ngoMgqibelo ebusuku.
Ubegijima umjaho wakhe wokuqala kule sizini kusukela ebuye ekulimeleni edolweni kanzima ngonyaka odlule. UVan Niekerk uphume endaweni yesibili eMadrid, wenza isikhathi esiyimizuzwana engu-44.56.
Lesi sikhathi singaphansi kwemizuzwana engu-44,90 eyisinqumo okufanele ube ngaphansi kwaso ukuze ungene kuma-Olympics aseTokyo, eJapan. Umjaho unqotshwe ngumgijimi waseColombia, uJose Zambrano owenze isikhathi esiyimizuzwana engu-44.51.
Umengamelo we-Athletics South Africa osanda kuqokwa, uJames Moloi, ulibongele leli qhawe ngempumelelo yalo.
“Siyambongela uWayde, abaqeqeshi nabasizi bakhe ngokuphumelela ukuzibekisela indawo kuma-Olympics. Isikhathi sakhe sibe kude kunalesi asiqopha saba yirekhodi, kodwa okubalulekile njengamanje bekungukuthi angene kule midlalo,” kusho uMoloi.
UVan Niekerk waqopha irekhodi lomhlaba lemizuzwana engu-44.03 kuleli banga ukuze awine indondo yegolide kuma-Olympics aseRio ngo-2016. Uzoba yingxenye yethimba lakuleli eliqinile labasubathi, futhi kulindeleke abe naqeqenjini le-relay.
Akuhambanga neze kahle kuCaster Semenya oweqe kancane esikalweni esibekelwe ukungena kuma-Olympics emjahweni ka-500m wabesifazane. Nokho usenalo ithuba njengoba kuzovalwa ngoJuni 29 ukuzama ukwenza isikhathi esifanele.
“Bonke abanye abasubathi basenethuba lokungena nabo njengoba isikhathi sokucala sisekujana futhi akumele balahle ithemba. Sibadinga bonke abasubathi bethu abayizihlabani eTokyo, ikakhulukazi labo abawina izindondo ngo-2016 okumele bayozivikela.
“Siyabanxenxa bonke labo abasalwela ukwenza izikhathi ezizobangenisa kuma-Olympics ukuthi bazikhandle, bengaphelelwa amandla. Sibacela ukuthi basebenzise yonke imijaho ekhona noma kuphi la beyithola khona ukkuzama ukwenza izikhathi ezifanele futhi bazilungiselele njengabo bonka ebanye,” kusho uMoloi.
Previous Previous post: UNurkovic uthi bazojabula babuye nganeno ngoba umsebenzi weChiefs awuphelile
Next Next post: Ushaywe yiChiefs wasala ebalisa ngokudliswa yiVAR oweWydad